6 eke mara mma ileta na Nọvemba | Bezzia
Maria onyekwere | 29/09/2021 10:00 | Oge ntụrụndụ, njem
Oge ọ bụla n'ime afọ dị mma ileta mkpokọta eke anyị na -atụ aro taa, mana ndị a ha na -enweta anwansi pụrụ iche n'oge ọdịda. Ma ọ bụ site na agba nke akwụkwọ osisi na -enweta ma ọ bụ site na mmiri iyi ha na -eto, a na -ewepụta Ọktoba na Nọvemba dị ka ọnwa kachasị mma maka njem ma ọ bụ njem mmụta na -aga ebe ndị a. Ma gịnị ka ha bụ?
1 Castañar si El Tiemblo
3 Ogige okike nke mpaghara ugwu mgbawa nke La Garrotxa
4 Ụzọ nke osisi olive narị afọ nke Martos
6 Ndagwurugwu Ambroz
Castañar si El Tiemblo
Nhazi nke El Castañar de el Tiemblo ebe a na -enye gị ohere inyocha ma mara otu n'ime oke ọhịa mara mma na pụrụ iche site na Valle del Alberche na Tierra de Pinares nke Castilla y León. Ọ dị naanị kilomita 90 site na Madrid, ọ na -aghọ nnukwu nhọrọ maka njem mmụta. Nke ukwuu nke mere na n'ime afọ ụfọdụ etinyere ihe mgbochi iji zere oke oke n'ime ọnwa Ọktoba na Nọvemba.
N'ime oge, agba nke ogige eke a nwere ike ọ gaghị adị mma mana ọ ka bụ ebe ị ga -esi na obodo pụọ. Ị nwere ike ịchọta gburugburu ebe a ụzọ dị iche iche nke ị ga -eji naanị gị ma ọ bụ ezinụlọ gị kporie ndụ, agbanyeghị, ọmarịcha chestnut El Tiemblo kacha ewu ewu. Ọ bụ otu Ụzọ okirikiri 4,4 kilomita nke na -amalite na mpaghara ntụrụndụ El Regajo wee na -aga na osisi chestnut nke narị afọ "El abuelo", nnukwu osisi chestnut nke narị afọ, ihe karịrị afọ 500. Ụzọ ahụ fọrọ nke nta ka ọ dị larịị, a na -ekewa ya dị ka nke dị mfe, na -eme ka ọ dị mma maka iso ụmụaka ma ọ bụ ndị nwere obere ngagharị.
Ogige Ntụrụndụ Cañón del Río Lobos bụ mpaghara okike echekwara nke Castilla y León. Ọ na -ekpuchi mpaghara karịrị hectare 10.000 n'etiti ógbè Burgos na Soria wee pụọ iche maka ọmarịcha ala ya nke ejiri mmiri Lobos kpụọ ogologo oge, ọmarịcha ebe obibi Templar nke San Bartolomé, na nnukwu ógbè ya nke griffon. udele.
N'ime ogige eke, enwere ụzọ dị iche iche ama ama nke ọma nke na-enye gị ohere ịmata ọdịdị ya na gburugburu ebe obibi ya. Ihe kacha enweta na amara bụ gaa n'ụlọ ebe a na -edebe anụ ụlọ nke San Bartolomé. Site na ọdụ ụgbọ ala Valdecea enwere ihe dị ka mita 1000 ruo esplanade nke hermitage, na ime ụzọ a ị nwere nhọrọ abụọ. Ị nwere ike iso ụzọ Osimiri, nke gụnyere imeri ụfọdụ obere nsogbu dịka ịfefe osimiri n'elu ịzọ ụkwụ, ma ọ bụ ịga n'ihu n'okporo ụzọ ọhịa, ije nke enwere ike ịme ọbụlagodi akpụkpọ ụkwụ na ihe ụmụaka.
I nwekwara Ụzọ ndị toro ogologo na -agafe na Canyon n'ozuzu ya. Ọ dịghị onye na -eweta nnukwu ihe isi ike karịa mkpa iji merie oke ịrị elu ma ọ bụ gafee Osimiri Chico, nke na -akpọkarị nkụ mana ọ nwere ike bụrụ ihe mgbochi n'oge udu mmiri. Dị ka ọ dị na ndò nke ebumpụta ụwa, iburu ụzọ jụọ ọnọdụ ya na ebe ozi ndị njem nlegharị anya dabara adaba iji zere ihe ijuanya.
Ogige okike nke mpaghara ugwu mgbawa nke La Garrotxa
Ihe mejupụtara karịa ogwe ugwu mgbawa iri anọ na mmiri iri abụọ na -asọ, ogige a nwere nnukwu uru eke. Ọ dị na mpaghara Garrotxa, na Girona, akwụkwọ akụkọ ya, ala na ihu igwe na -enye ya ahịhịa dị iche iche, na -enwekarị obi ụtọ, nwere oke osisi oak, osisi oak na ọhịa beech nke nwere ọmarịcha ala.
Ọ bụ otu n'ime nnukwu ebumpụta ụwa nke ndị niile anyị tụpụtara taa. O nwere 25 ụzọ njem ndị ụkwụ nke ogologo na ihe isi ike dị iche iche na -agafe ebe kacha atọ ụtọ na Park Natural. N'ime ogige ahụ, ị ​​nwekwara ike ịga na hermitage n'ime ugwu mgbawa Santa Margarita, oghere ihe ngosi nka nke ugwu mgbawa Coscat ma ọ bụ obodo ochie Sant Pau. Ị ga -achọ ngwụsị izu iji ghọta ihe niile.
Ụzọ nke osisi olive narị afọ nke Martos
Ogige osisi Martos dị na Jaén, n'ime otu obodo nke Nkume ya chebere, na -enye ha ezigbo ikuku ikuku na ala na -eme nri nke ọma. A na -emeri ihe karịrị hectare 20.000 nke ime obodo ya site na monoculture nke osisi oliv na, ọkachasị, site na ịma mma nke nnukwu osisi oliv nke otu narị afọ.
Ụzọ osisi oliv nke narị afọ gara aga na -ekpuchi mpaghara hectare 84, yana osisi 5.394 n'ozuzu ya, ụfọdụ n'ime ha bụ ezigbo ihe ọkpụkpụ dị ndụ. Ihe karịrị 60% n'ime ndị a karịrị afọ 200, ọ bụ ezie na ọdịnala ọnụ gosiri na osisi olive nke Ebe Llano de Motril ha kariri ọkara narị afọ.
Enclave dị ihe karịrị otu kilomita site na etiti obodo Marteño, n'akụkụ okporo ụzọ na-ejikọ Martos na Santiago de Calatrava (J-213). Na kilomita 1,3 ị ga -ahụ ihe ngosi izizi nke Osisi Olive Centennial na, mgbe ị gafesịrị ụfọdụ ụlọ ọrụ ugbo, ị ga -ahụ ihe ngosi nke abụọ.
N'ókè dị n'etiti Burgos na Basque Country bụ nsụda mmiri kachasị elu na ala mmiri: nsụda mmiri Nervión. Nnukwu nsụda mmiri a nke mita 270 nke ịdị elu dị na mpaghara nchekwa Monte de Santiago, bụ ihe ngosi nke okike nke anyị na -enweghị ike ịnụ ụtọ ya mgbe niile.
Ịma mma nke Salto del Nervión dị na mmiri mana naanị maka ngụkọta ọnwa abụọ n'afọ ka anyị nwere ike ịtụgharị uche n'ụzọ dị otu a. Mgbe ọ na -agafe ala karst, ọ naghị enwe mmiri mgbe niile ebe ọ na -ahụ ma na -asọ na mpaghara ala nke ọdọ mmiri Delica. Ya mere a na -atụ aro ya gaa leta ya mgbe ụbọchị oke mmiri ozuzo gasịrị, oké ifufe ma ọ bụ gbazee.
Enwere ụzọ atọ ị ga -esi nwee ọ enjoyụ nsụda mmiri Nervión. Site na Burgos ị nwere ike nweta ọtụtụ dị mfe ma dị mma iji ụmụaka mee. Naanị kilomita abụọ n'ụkwụ, ị ga -erute ebe nlele dị egwu nke ị nwere ike ịhụ nsụda mmiri a dị egwu. Ụzọ ọzọ ị ga -esi hụ nsụda mmiri Nervión site n'elu ya bụ nke na -amalite n'obodo Untzaga na mpaghara Alava. Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ ime bụ obere mmega ahụ ma tụgharịa uche na nsụda mmiri Nervión na ọwa mmiri Delika niile dị egwu site n'akụkụ ọzọ, nke a bụ ụzọ kacha mma.
Na ndagwurugwu nke ugwu Cáceres, na mpaghara gbara Hervás gburugburu, a na -eme ọdịda ọ bụla n'etiti Ọktọba na Disemba Magical Autumn, atụmatụ nke na -eme ka ekpori ndụ na anụ ọhịa ime obodo mara mma. N'ihi ya, ọ bụ otu n'ime mpaghara eke anyị họọrọ ileta na Nọvemba.
Oge mgbụsị akwụkwọ Ọ na -atụ aro ka ị jiri ụzọ igwe kwụ otu ebe na -eku ume n'oge mgbụsị akwụkwọ, ịga njem, ọrụ mmiri na asọmpi ugwu, jiri egwu egwu mee ka uche gị dịghachi mma ma weghachite ụtọ ọdịnala na nlele gastronomic. N'oge na -adịghị anya, ị ga -enwe ike ịkpọtụrụ mmemme niile na webụsaịtị Ambroz Valley.
Ịchọghị ịga njem mmụta ma ọ bụ ịkwadebe ime ime obodo n'otu n'ime ogige ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Oge ntụrụndụ » 6 eke mara mma ileta na Nọvemba
Igodo iji jiri ohere efu karịa dị ka di na nwunye